Le ikheshi itulo - Isandulela | Apg29
abasebenzisi Imali achazwe iintsana Small abo bangazazanga okulungileyo yabo.
Ezine "Izilo ikheshi" ezinkulu (Mastercard, Visa, American Express kunye isidlo sangokuhlwa Club) uye wavunyelwa ukuba ubukho elihlazo iintlawulo i-West kaThixo. It is hhayi kontantlösheten kuphela ngokwaso negative kodwa inkqubo yezoqoqosho osemva oku.
Ngoku ndiya kuvakalisa ikheshi yelenqe of "Cash Kuphela" serialized apha Apg29. Le ncwadi akuvumelekanga ukuba isekelwe eBhayibhileni kunye ukholo lwamaKristu, kodwa umdla kakhulu ngenxa yoluntu lwehlabathi yoqoqosho yolawulo njengokuba iSityhilelo 13 ichaza.
Apha baphathwe izenzakalo ikheshi ezifana credit cards, iintlawulo ikheshi mobile kunye inkqubela implants kunye tattoos elektroniki. Ubungqina bubonisa ukuba ikamva umzimba kufuphi bombane ngokusebenzisa ukuchongwa nkcukacha ziya kusebenza zombini amakhadi, iphepha-mvume lokuqhuba, passport, amakhadi njalo njalo. Isicelo ngasinye ikheshi non kwakhona kuthetha ukuba kusenokwenzeka ukuba umsebenzisi (ngaphandle negative bonke obu bugcisa) ukuba kwixesha elizayo uya ungena traps ikheshi. Ngenxa yesi sizathu, le ncwadi uzama ukunika nembono ebanzi epheleleyo umzimba kufuphi bombane. Kontantlösheten na ngumqolo oko kudla ngokuba umzalwana kuluntu enkulu.
Iintlawulo ikheshi eqhelekileyo ngoku kalukhuni zahlulwe yakwenza nokuba iicredit cards, iiselula okanye Internet. Idla ngokuba Kwimeko yokudityaniswa ezi. iibhanki esihambelanayo iibhanki Internet, iibhanki mobile kunye iibhanki ngomnxeba. Ukusetyenziswa okwandileyo zezi bhanki wathabatha benyhwalaza ukunciphisa imali. Nakuba enye engase abe nomdla kulo mxholo ngaphezu kontantlöshet ingqwalasela. Umzekelo,-ATM, imali, ezothutho imali, iibhanki, kunye nemali yokugqibela kodwa okunga kuncinananga. Yonke into ixhomekeke eyile kunye. A utyekelo ixesha elide iye ngaphantsi kuze kutsalwe imali ehlawulwa ukhetho ikheshi. Ukusuka kwindawo ikheshi lwembono, iintlawulo ezincinane yaba isithende Achilles. Intlawulo phakathi (peer-to-peer payments) abantu nazo ngakumbi nangakumbi Kwiiselula kunye nezinye iindlela.
Ugxininiso apha phezu US kunye Sweden kwakunye namanye amazwe aliqela zagutyungelwa kule ncwadi. kahle kakhulu amakhadi akhawunti 'xi tiyisiwa hi United States a elibi amakhadi ukubalasela kwi West. Le zamakhadi wesizwe ongaphandle United States (nezikwa negative kakhulu) wenza umonakalo nangakumbi xa ekugqibeleni wadliwa naliphi ikhadi elikhulu yaseMelika. Oku ke wazala jikelele kwaye wazisa inyathelo ihlabathi elinye kufutshane intlawulo ikheshi bodwa. Apha, MasterCard uye waba kwisigxina esikhethekileyo kuba zimdlile ngqo okanye ngokungathanga ngqo zombini Eurocard (Sweden) kunye Mondex (UK).
Le ncwadi yahlulwe yangamacandelo kunye amaqhekeza ubude ezahlukeneyo kunye nesiqulatho ukunika umfundi utshintsho kwaye adinwe lwesicatshulwa ngokugqithiseleyo lwesihloko. Incwadi ethi The kutshintsha phakathi kwala macingo mabini eziphambili ebomvu. Uphuhliso yoluntu ikheshi kunye nemikhosi okanye ngabanye, ubukhulu becala eSweden kunye US ezachaphazela ulwalathiso ikheshi okanye wamelana nayo. Oku ugalelwe ugxekwa, iingcebiso bokuxhathisa kwaye lokuphikisa uluntu ikheshi kunye ingxabano ngemali. Zininzi izinto onokuncedakala nemali. Bavumela ukuthenga angaziwa ukuba akukho lula, akukho mntu wesithathu ebandakanyekileyo kunye nabantu ngokukhululekileyo ngaphandle kokulawula imali omnye komnye. Abantu abaninzi abanyanisekileyo. Ke ukusekwa ikheshi uphatha wonke ngokungathi bengabenzi bobubi.
Isibakala sokuba abucala ikheshi angaphandle ishishini kunye norhulumente kunye nentsikelelo abasemagunyeni kufuneka bavunyelwe ukuba endaweni yesizwe karhulumente cash ikharensi nje umjibilizi. Wonke umntu kufuneka ukubona engenangqondo kwaye ayingozi konke ukutya namandla kuya kuveliswa ngokupheleleyo ngaphandle kwe Sweden, namandla kwakuza kumazwe ezivelisa. Kodwa yanyuka kontantlöshet wambona kakubi nje uphuhliso esempilweni. Oku kusekelwe uninzi ukusekwa. I kubi ukuba malunga ilizwe oluvelisa eyodwa. Ngokuphathelele kontantlöshet ukuze xa Sweden ziyindlela sele imiqathango intlawulo ngamakhoboka eUnited States. An eqhubekayo ikheshi ngamazwe mkhuba kucaba indlela limnyama elizayo.
Le ngxoxo ngokugqithiseleyo ekrwada ngaphandle uthelekiso le ngxoxo hackneyed for credit cards kunye kontantlöshet. Wena esidibana ebomini yaye ayicingi kunye nabantu abakrelekrele oku ngenxa nje omnye iimpikiswano lobuxoki ukulungele ukuncama inkululeko yakhe elizayo ngokusebenzisa amakhadi ngetyala. Le ncwadi motargumenterar ingxoxo enamandla ekrwada. ukhetho ikheshi usoloko bangcoliswa iintlawulo ngaphandle mhlawumbi kangangexesha elithile. Oku inkunkuma esulungekileyo kwaye ngokwaso luhlobo "inkunzi slow". Cash akanayo imali.
Cash senziwe ngendlela irobust ezongeziweyo, kufuna akukho iziseko zobugcisa isandi amagunya kwaye ikhuselekile. Iinkqubo ikheshi ingakumbi abangakhuselekanga. Ukufikelela kufanele cash surplus
nje leyo amabala asixhenxe, anamakhulu mahlanu ibekwe kokha yesithathu kawusi izimvi lomntu othile, uzitshise ndawonye umdiza lighter. Kontantlöshet iibhedi iintlekele intlawulo wonke. Ngolo hlobo ayizange yenzeke nemali. Cash i ukhuselo kunye nokhuseleko.
Le ncwadi yenzelwe ziingceba abadibana okanye mosaic ukuba ekugqibeleni inika umfanekiso yembali, ngoku nakwixesha elizayo abamnyama kontantlösheten. Akukho kontantlöshet "white". Yonke into omnyama. Le mithombo asetyenziswe apha ukubonisa "kweziyobisi eliqaqambileyo black" kontantlöshetens ziquka Wikipedia, amanqaku amaphephandaba, teletext kunye nolwazi efikeleleka lula kwi-Internet lula bafunyanwe ngaphandle ngokubhekisela kwabo bafuna ukwazi ngakumbi. Pure kontantlöshet uncwadi iye yasetyenziswa njengomthombo le ncwadi indlu amakhadi kaDaniyeli Goldberg noLino Lars Petersson.
Le ngxoxo kwemali kunye kontantlöshet e Sweden ngokumileyo kakhulu lithomalele ngemali. Yokulwisana kontantlöshet kunye nemali ekhoyo kodwa kunqabile kakhulu ekuhlaleni kwabantu kunye namashishini. Kuba ngathi umthetho ukuba icala kuphela utshutshiso enye kwaye akukho ukuzilandulela. Esemkhumbini ohleli imali. Le wokhuselo kuphela olukhoyo apho ibrifkheyisi emi legqwetha buhlungu kunye cwaka. Naliphi na igqwetha ubonakala ke ukuba. Kodwa mhlawumbi kukho igqwetha encinane kweli tyala. Kusenokwenzeka umkhulu Teskedsgumman. Kodwa makhe khupha igqwetha kangako ukuze batye ezinkulu ngqindilili. Vumela loqhankqalazo eSweden nxamnye kontantlöshet namandla.
Enye mzekelo kukuba ngodaba amandla enyukliya waba kuphela ukhetho. ukwanda olomeleleyo. Ngaphezu koko, abantu akavumelekanga ukuba bavote noba-ewe okanye hayi kule ngenxa yokuba uluntu sele wagqiba ukuba amandla enyukliya (funda kontantlösheten) ekugqibeleni uza phezu kwazo zonke ezinye amandla. Abantu kwimeko kwemali eziinkozo kunye kontantlöshet nto kuthi. Kodwa zimvo bekuya kuba kulo mzekelo idiotic. Awukwazi uvote ukuba inyanzele ngeqhudu (total kontantlöshet) okanye ukugcina idemokhrasi (cash). Ukulawulwa akufuneki ekhethiweyo.
Ukuba eSoviet Union na kwafuneka wayefuna ukwenza wamaKomanisi ehlabathini. Ku ngomoya akubanga into eUnited States labantu bayo amkele. Kufuneka ukunyanzelisa iinkqubo lezopolitiko nakwelemali lizwe. Ngoku ke yokuziphatha. Kodwa xa US izama ukunyanzela lonke ihlabathi ikheshi and financial system apho bambalwa kakhulu abaqhankqalazi. Ngoko akukho mahluko kwi zonke amandla yobukomanisi yehlabathi. Kontantlösheten ayikho ngokwenene malunga ukuba ikhadi yeplastiki wallet yakho. It Ngokusisiseko into sobala profound. Ukongeza, i-US kontantlöshetens ukumkani genomruttne ngaphandle umzekelo efanayo ehlabathini.
sengqondo Banks översittaraktiga idla ukuba kube malunga ukukhula ukuqala ukusebenzisa amakhadi ngetyala. abasebenzisi Imali achazwe iintsana Small abo bangazazanga okulungileyo yabo. Ekugqibeleni ukuvuthwa kubo nendlela Bank kwaye ngokwabo usebenzise ipoti, okuhambelana ikhadi lamatyala. Facts and eqhelekileyo bonisa ingqiqo endaweni ukuba malunga sivuthiwe kunye ingqiqo bokuxhathisa kwaye bayala ukusebenzisa amakhadi ngetyala. Kwanele kunye Uhlalutyo kunye izibakala ezithile ubuthe apho safumanisa ukuba le nto kunokuba malunga ukubawa banks kunye ukuthanda izinto.
Nkqu nabantwana abancinane kakhulu niyazikhethela. Banokuzigqibela ngokwabo ukuba bafuna ukutya okanye hayi xa ukutya okunikelwe. Gqiba ukuba ufuna ukudlala ibhola okanye Urhashaza. Kodwa abadala Swedish zivunyelwe ubude ukuba ukukhetha imali. Le stroller na kunokuba umntu akhule kunye imilenze enoboya elide unamathele ngaphandle. Umzali kontantlöse elinde ngaphandle umonde kwi "umntwana" ukuqala idlala yokudlala alenga eliquka iibleyidi ahlanganisiweyo. Ezi razor ezi amakhadi ngetyala.
Phakathi kuka-50 leminyaka 80 leminyaka, Sweden wayeselapho Sweden kungakhathaliseki nokuba yokuba urhulumente zentlalo wedemokhrasi okanye yobusoshiyali abalawula. Eli lizwe benamandla ntle, ukhuseleko, cala nokuzimela. Ke konke waqala ukuba mbi. Ukuzimela wanyamalala ngakumbi nangakumbi, hayi ubuncinane ngokwemigqaliselo yemali. Le jikelele kwesigele wawangenisa ilizwe lethu ibe ukukrwitsha ngokuqinileyo. Uqoqosho waba ikheshi ngakumbi nangakumbi.
Riksbank uncome lo mkhuba uthengiso kodwa yabangela kuphela ziintlekele ezifana Panaxia scandal kunye nokuphanga-ntaka. Imirhumo ngokuba chockhöjdes kwemali eziphantsi yibhanki. Kubekho ukunyuka ukuze lendaba 1200 ekhulwini. Banks waqhubeka ukukhalaza kakhulu kwi abizayo
ulawulo nangona bona ngokwabo ubukhulu becala ukuba ityala. Ngeli xesha, yaba amasebe ebhankini kwakhona ikheshi kwi ngesantya eyoyikisayo. Urhwebo kunye iibhanki ukhalazela phezulu malunga nendlela eninzi intlawulo yemali xa enyanisweni, thina abathengi ngokusebenzisa toppings zoqoqosho ukuyihlawula.
Ngohlangothi avgrundsdjupets ezantsi kwi-urhulumente Alliance. ulawulo Cash ngogonyamelo phantse ngokupheleleyo esibingelelweni babucala. Ekubeni Sweden iye kancinane waqhubeka sehla eludakeni emazantsi ezantsi lilonke ikheshi intlekele. Uphando phantsi korhulumente Alliance ngayo umjikelo yemali kuphela kwaye hayi ilungelo labantu sedipozithi ndirhoxise imali ebhankini. ayibonakali Ezinye ukhetho ixesha elide phakathi imali kunye namakhadi ukuba avunyelwe.
elandelayo Urhulumente bomvu-luhlaza wavuma zonke isimemo efanayo ingxoxo ukusuka kwenye ngabameli uphambili ukugxekwa kontantlöshet lulonke. Umfundisi kuxoxwe ngalo esi simemo onke amaqela anomdla. Eli xesha, nkqu abameli kontantlöskritiska ukuba abe kushishino lwezokhuseleko kunye lonke Sweden kufuneka aphile. Kwakhona ke riksdagssak ngemali. Kodwa nayiphi na ziyajika emalunga nomgaqo-cash esempilweni nonamandla ngelishwa ayikwazanga Kuyabonakala. Umgxeki nje ekhankanywe ngayo kontantlöshet iyonke iye yabonisa ukuba isisombululo kule ngxaki xa ubhala ukuba urhulumente kufuneka athathe umva uxanduva imali.
Ezinye iintlobo zophononongo ziye lubonise ukuba bonke ezisibhozo kwishumi abantu bafuna inkqubo yolawulo imali iya kwanda. Iibhanki zithi abathengi amanqe ukukhusela ngokususa imali xa abathengi, ke, phantse biha ukufumana ukuba apho. Abantu baya kuba akukho ndlela kuthintele ukusekwa ikheshi ukusuka Woyixhela ngokupheleleyo inkqubo cash. Nge ikheshi Ukusekwa kwakuthetha ikakhulu i Riksbank, iibhanki ezinkulu, iinkampani ikhadi ezintathu yaye inxalenye enkulu kakhulu kwezopolitiko, ushishino kunye namajelo eendaba. Ukongeza, ezinye owayesakuba idol pop. Ngoncedo ubuxoki, nakwisiqingatha ubuxoki okanye ibaxwe ziye zenza abantu Swedish ukuba ukukhwela. Emva kwabo, phakathi kwezinye izinto, ihlabathi zemali US kunye neebhanki zalo ezinkulu kunye zamakhadi.
Ezine "Izilo ikheshi" ezinkulu (Mastercard, Visa, American Express kunye isidlo sangokuhlwa Club) uye wavunyelwa ukuba ubukho elihlazo iintlawulo i-West kaThixo. It is hhayi kontantlösheten kuphela ngokwaso negative kodwa inkqubo yezoqoqosho osemva oku. Kwiinkqubo ezithile zentlalo kunye kumazwe amaninzi bakhangela kulo njengento entle ukuba uqoqosho luya kuqhuba amok ngaphandle kwemiqathango. Olu suku lubonwa inkqubo self-elawula usempilweni. Oku kufanele kanye ukuba kuthelekiswa kwabanye celebrity umthandi nzima ukuze ngamanye amaxesha edlalela nganeno ngaseludinini yokufa.
Isihloko Le ncwadi nangona akukho malunga mbono iyelenqe. Ukuba ufuna ukuphucula ngokwawo kwezi nezimfundiso umlambo ulwazi kwenye indawo. Bekuya kuba ngumlambo okhohlisayo bathi le ncwadi njongo. Kuyinto luluvo kakhulu kwaye zobuqu. Lwenzelwe njenge umnxeba nothandano kumzabalazo wokulwa inkqubo zemali ogulayo apho kontantlösheten Lowo ngumongo. Ukwenza le endaweni apha isiseko ubungqina esibanzi. Kuphosakele ukuzama ukufumana iinzuzo into ngokwesiseko negative. Le ncwadi umnxeba ukuze ubambe umququ lokugqibela.
Kukho izizathu ezininzi ukuba le ncwadi saba. Kodwa ke isizathu inkulu kunye udiza waqhekeza umva le nto yaba kukuba uninzi iibhanki engasekho ukuba imali ebhankini yaye ikheshi. Ukuba uninzi yeebhanki nangoku ukuba bavunyelwe ukuba ukurhoxisa imali ebhankini ukuze le ncwadi ingabi. Kuye kwaba kukunandipha ukubhala le ncwadi. Kodwa elinye owayebalasele enkulu yokubhala iye iphinde umsindo nokuxakaniseka ngenxa yokuziphatha a iindawo ikheshi lokuhanahanisa kwaye zilula. Umbhali unqwenela ukwaziswa, kunye iimpikiswano ezininzi nokukhuthaza ukuba uxhathiso udaka kontantlöshet eSweden.
Iintsingiselo ikheshi kunye ezenzeka imali iya kunjalo kakhulu ngokukhawuleza. Kuphela ekupheleni umsebenzi incwadi, izinto ezibalulekileyo kwenzeka ukuba ningangeni le ncwadi. Ukuzisola umbhali malunga ngezinto ezithile ezibalulekileyo eziza kuza kule ncwadi. Kodwa umntu kufuneka bayeke ukubhala ngexesha elifanelekileyo. Indlela ozihlaziya ngayo kwaye okunomvuzo ngayo ukuba ubhale incwadi, kungenxa yokuba injongo yokuba abantu abaninzi kangangoko kunokwenzeka ukuyifunda.
Kontantlösheten eyodlula yimbi isifo yoluntu kwimbali yehlabathi. ehlangene ngokupheleleyo ukugabha yembono, amathumba, yencindi, ubomvu, amehlo abomvu kunye yophela ngaphakathi. Abantu nenkani abafuna ukusasaza kontantlöshet ifana isibetho idibanisa eGobhi enkulu ngokwenene emlonyeni uze amathe uthimla i uninfected ngqo ebusweni. Kunokuba uncedo ukutshica okanye uxolo ukuba alinde ngomonde kontantlöse ukuba wabulela. Nkqu nabantu abangenayo ngokwenene kontantlöshet kubona "njengoko kubhaliweyo iinkwenkwezi" kuba becinga ukuba nganto ukuba bazame ukulwa nayo. Le ncwadi ufuna ukubonisa ukuba unako yaye kufuneka silwe uluntu ikheshi.
Le ncwadi yagqitywa ekupheleni ka 2015/16. Ibhalwe ngovuyo kwindawo ethile eSweden. Le ncwadi lunikezelwa bonke abantwana Swedish embellish ubomi thina abadala. Oku akubhalwanga ngenxa abantwana ukuba ayifunde, kodwa ukwenza into ukuba babe nekamva njengabantu free elide kangangoko kunokwenzeka.